HomeRugta Ganacsiga Shaqaalaha Iyada ee Bursa
Xawaare sare oo khaldan ayaa ku socda Bursa: In kasta oo fikirka, habka iyo adeeggu fiican yihiin, tareenka xawaaraha sare ku socdaa ma loo keeni doonaa Bursa dareen buuxa? Hadda… Wadahadal. Marka laga soo tago iyor Criticizing. Codsigan hadda socda… Istanbul iyo [More ...]
Saddexaad Bridges Symbolium Saddexaad
Saddexaad Buundooyinka Viaducts Dood-cilmiyeedku wuxuu billaabmayaa: 3-Bridges Viaducts Symposium oo ay martigelin doonto Rugta Injineerrada Rayidka ah (IMO) Laanta Bursa waxaa la qaban doonaa May illaa 8-10. Taageero laga helo Jaamacadda Farsamada ee Bursa iyo Jaamacadda Orhangazi [More ...]
Xubnaha IMO 3. Baadhisey dhismaha "Bosphorus Bridge Bridge"
Xubnaha Imo 3. Dhismaha Buundada Bosphorus: Rugta Injineerada madaniga ah ee Bursa Laanta, 3. Wuxuu abaabushay booqasho farsamo oo ku taal Buundada Bosphorus. Injineerada, Turkey fursad u helay in waaqiciga arko mid ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn. dhismaha [More ...]
Cambaarayn saxaafadeed laga soo bilaabo IMO ilaa Bursa Metropolitan Dowlada: Bursa Rugta Injineerada madaniga ah (IMO), 'Bursa Light Rail Intercity-Kestel Line', 'Thought New Tram Lines' iyo 'Qorshaha Masterka Gaadiidka Bursa' [More ...]
Dhaleeceynta tareenka ayaa sii socota
Dhaleecaynta tareenka ayaa sii socota: Dawlada Hoose ee Magaalaweynta Murashaxiinta Madaxweynenimada ee Xisbiga AK Party Rugta Injineerada Bursa Gudoomiyaha Necati Sahin, ayaa isu keenaya saxafiyiin. Kama soo horjeedo aaminsanaanta caanka ah… Nidaamka gaadiidka ee Bursa iyo [More ...]
Sidee xariiqa tareenka ee T1 uu saameyn doono taraafikada Bursa
Sidee khadka tareenka T1 uu u saameyn doono taraafikada Bursa: Necati Şahin, Madaxweynaha Rugta injineerrada madaniga (IMO) Laanta Bursa, ayaa bayaan ka soo saartay khadka T1 tram. T1 tram si loo fududeeyo gaadiidka magaalada [More ...]
4 ee adduunka. Burburinta Weyn
4 ee adduunka. Xubnaha Rugta Bursa ee injineerrada madaniga ah waxay booqdeen tiirarka ugu weyn ee mashruuca wadooyinka Istanbul-Gebze-Orhangazi-Izmir. IMO Bursa Branch safarada farsamo si ay mashaariic ugu weyn ee Turkiga [More ...]
Ha u naxariisto lacagta YHT ee Gacanka!
Ha u nixin hay'adda YHT ee marinka gacanka! Ka feejignaanta deegaanka, dhibaatooyinka bulshada iyo reer magaalka iyo sameynta dhawaaqa ma muujineyso inuu qofku sidan u dhaqmayo maxaa yeelay qasab ma ahan inuu rabo shaqooyinka qaar. [More ...]
Gaadiidka Tareenka Baaskiilada Gacanka Cadmeed Bursa wuxuu ku jajaban yahay Istanbul 30
Haddii Tareenka Xawaaraha Sare uu dhaafo marinka Gacanka Bursa inta u dhaxaysa Istanbul 30 Daqiiqo Madaxa Laanta Bursa ee Rugta injineerada madaniga Necati Şahin wuxuu yiri, hızlı Tareenka xawaaraha sare leh waa in loo tixgeliyaa inuu yahay qeyb muhiim ka ah isgoyska İstanbul-İzmir Highway. [More ...]